LUX Chongzuo, Guangxi dia manendry General Manager
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » LUX Chongzuo, Guangxi dia manendry General Manager
coco dia mpitantana jeneralin'ny lux chongzuo guangxi
LUX * Resorts & Hotels dia nanendry an'i Hotel Coco Wen efa za-draharaha ho mpitantana ankapobeny ny LUX * Chongzuo, Guangxi Resort & Villas izay nandrasana, novinavinaina hisokatra amin'ny 1 Janoary 2021.
Nandritra ny 27 taona nahitana traikefa fandraisam-bahiny lafo vidy nohon'ny fiarahana niasa tamina vondrona hotely kintana dimy tany Mainland China, Taiwan, Malaysia ary ny Emira Arabo Mitambatra, ny teratany Taiwaney dia nanatevin-daharana an'i LUX * Resorts & Hotel avy any Langham Place, Changsha izay nitana ny toerana amin'ny maha mpitantana ankapobeny.
"Ny traikefa ananan'i Coco mialoha ny fisokafana, indrindra ny tsena sinoa, miaraka amin'ny fisainana stratejika sy ny fitarihana ny fahaiza-mamorona dia mametraka azy ho olona mety hampahafantatra ny fenitry ny fandraisam-bahiny LUX * Resorts & Hotels 'Lighter, Brighter * miaraka amin'ny laharam-pahamehana ao amin'ny Tanibe China," hoy i Nitesh Pandey, Chief Operating Officer - APAC an'ny The Lux Collective.
"Manetry tena aho rehefa omena fotoana mamela ny dian-tongotra amin'ny tongotry ny orinasa," hoy i Wen. “Manantena ny hametraka fari-dàlana vaovao miorina amin'ny serivisy mora ampiasaina miaraka amina vokatra premium sy traikefa tena misy ao anaty kolontsain'ny foko vitsy an'isa ao an-toerana aho.”
Miaraka amin'ny mari-pahaizana licence en Entomology dia faly indrindra i Wen nahita ny faritanin'i Daxin izay fanta-daza amin'ny toe-javatra voajanahary tsara tarehy manakaiky ny riandrano transnational lehibe indrindra any Azia ary iray amin'ireo valan-javaboary fiarovana tsara indrindra eto amin'ny firenena.
LUX * Chongzuo, Guangxi Resort & Villas hanolotra suite 56 sy villa amin'ny dingana voalohany ary miorina eo akaikin'ny renirano Mingshi mahafinaritra miaraka amin'ny sary karst mahavariana sy tampon-tampon-tendrombohitra manintona.
Fironana isan-karazany, fandrahonana amin'ny fanombanana ny tsena momba ny tsena Pemetrexed 2020-2029